Otu esi eme ka ego di n'usoro bitcoin - nkuzi site na uzo
Isi > Mkpuchi > Otu esi eme ka ego di n'usoro bitcoin - nkuzi site na uzo
01.02.2018 · 0 · Ntinye niile maka February 2018
Otu esi eme ka ego di na bitcoin echiche a echeela otutu ndi mmadu. Onye ọ bụla anụla banyere cryptocurrencies na isi bitcoin. O gosipụtara ike nke ukwuu na njedebe nke 2017, wee ghọọ ezi mmetụta ego. Ugbu a ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara banyere Bitcoin. Ọtụtụ ndị na-akwa ụta na ha ahụghị ozugbo ihe ọ ga-eme ma tụlee ego ole ha ga-arụ ma ọ bụrụ na ha etinye ego na ya n'afọ gara aga. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa iche na ihe niile agafeela. Cryptocurrency nwere ike na a ga-akwụ! Taa, anyị na-enye ntụziaka site na ntụziaka banyere otu esi etinye ego na usoro bitcoin.
Otu esi eme ego na bitcoin
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ anyị achọtawo akụkọ banyere ego nzuzo. Ọtụtụ mgbe, akụkọ akụkọ ndị a na-atụgharị uche banyere otú
hackers zuru a crypt mgbanwe;
ndị isi ojoo nara ego site n'aka ndị ọrụ bitcoin;
ndị omempụ jidere onye na-ejide crypto-ngwá;
ndị uweojii n'oge ọchụchọ gbalịrị ịnyefe bitcoins si akpa ego nke onye nwe ụlọ ahụ banyere ego crypto-ego.
Ozi ọma a niile na-egosi na maka arụmọrụ na bitcoin, ọ dị mkpa iburu n'uche ọtụtụ ihe dị iche iche dị iche iche ma mee ka ha dị nnọọ nro na nchedo kachasị sie ike. Mana n'adịghị ka akụkọ ọjọọ ahụ e depụtara na mbụ, anyị nwere ozi ọma abụọ maka gị:
Iji nweta usoro bitcoin, ịkwesighi ịzụta ya.
Ị nwere ike n'enweghị nsogbu ọ bụla ma n'oge ụba, na n'oge ọdịda.
Kedu ihe na-enyere aka gbanwee ahia na ego mkpuchi? Azịza ya bụ nhọrọ cryptotrading!
Echefula na bitcoin, n'agbanyeghị na ọ dị iche iche, bụ akụnụba ego, dịka ego ego ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ọ bụ akụnụba ego, mgbe ahụ ụgwọ ya na-akpali, e nwere ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ákwà, mgbanwe na ahịa. Zụọ ha otu ndị ahụ na-ere euro na dollar, akụrụngwa na ihe onwunwe. Nke a, n'aka nke ya, na ị nwere ike ịnweta usoro bitcoin n'enweghị ihe ọ bụla, karịsịa na nke ọ bụla n'ime mmegharị ya site n'enyemaka nke nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
Iji malite, anyị chọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ a pụrụ ịdabere na ya, onye nwere ego mkpuchi na ndepụta nke akụ. N'ụzọ doro anya, anyị ga-ewere onye na-ere ahịa nke na-ewe ebe mbụ dị nsọ na ndepụta anyị - Bimo.
O nwere ihe niile ga - eme ka anyị nwee ihe ịga nke ọma ma mee ka o nwee ike ịmalite inweta ọbụna ndị na - amalite:
Ọnụ ụzọ nbata - nhọrọ site na 1 dollar na nkwụnye ego sitere na 10 dollar.
Azụmahịa ahịa nke oge a na ngwa ngwa nke nwere ike iji nwayọọ na-emezi template ahụ.
Ngwa Crypto-ego maka ahia.
Debanye aha ya na onye na-ere ahia ma malite inweta bitcoin taa
Mana maka nkwekọrịta nhọrọ anyị iji nweta uru, anyị enweghị ike ime n'enweghị atụmatụ. Nzọụkwụ ọzọ nke ntụziaka nzọụkwụ-site-nzọụkwụ bụ atụmatụ bara uru maka trading bitcoin "Marmot".
Usoro nke inweta usoro bitcoin
Dị ka ihe atụ nke atụmatụ Bitcoin na-arụpụta ihe, anyị na-enye usoro ihe ngosi Marmot. Ụkpụrụ na algorithm maka ịbịpụta amụma nke usoro a na-eweta ahịa karịa 85% ọnụego ya na nsonaazụ dị mma. Nke a, yana ihe dị iche iche nke ịmepụta amụma na ọkwa ruo 15 kwa awa, na-enye ohere sara mbara maka ịzụ ahịa bara uru.
Ejiri usoro ihe ngosi nke usoro a bu ihe ngosi abuo:
Maka nke ọ bụla n'ime ha, e doro ntọala ahụ ma nwalee ya. Mwube ndị a na-n'ụzọ ziri nnọọ ezi chọpụta otu ebe na-emekarị nke ahịa ije.
Iji tinye usoro ịzụ ahịa, ịkwesịrị ịmepụta ụdị teknụzụ maka usoro "Marmot" na chaatị.
Iji mee nke a, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
Quotes Bitcoin na-asụgharị n'ime oge oge S30.
Dee ihe niile na-egosi na ihe nrịbama nke Bimono.
Maka RSI, setịpụ ntọala: 50 ahịa atụmatụ ọnụahịa, setịpụ ọfụma n'etiti ọnụ ọgụgụ.
Maka onye na-agbanyeghị 75 / 8 / 4, ọ naghị agbanwe agbanwe nhazi nke arụmọrụ.
N'ihi ya, a ga-etinyerịta atụmatụ nke usoro atụmatụ na eserese ahịa, ị ga-enwe ike ịme mkpu na ọnọdụ nke usoro ahịa ọhụrụ.
Dị ka data mgbaàmà maka ọnụ ọgụgụ ndị na - egosipụtakarị ihe ngosi:
Mgbanwe nke agba agba nke Alligator agba agba agba na-acha uhie uhie na agbacha agbaji nke usoro okwu-efu (nke na-acha anụnụ anụnụ);
RSI ọrụ inyeaka na-ezo aka na njedebe na-aga n'ihu nke ahịa - movings gafere akara nrịgo elu;
Dị ka data mgbaàmà maka ọnụego ala, jiri akara egosi:
Mgbanwe nke agba agba agba agba agba agba na agba aja aja na-acha agba aja aja na-acha uhie uhie mebiri ala nke usoro okwu-efu (nke na-acha anụnụ anụnụ);
RSI ọrụ inyeaka na-ezo aka na njedebe dị ugbu a nke ahịa - movings gafere akara ala;
Oge njedebe na njikwa mana
Maka ịzụ ahịa ahịa ma nweta nsonaazụ kachasị elu, jiri nkwekọrịta na njirimara njedebe nke 5 nkeji. Ya mere, i nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na nke ọma.
Na-arụ ọrụ na atụmatụ ahụ, ọ dị mkpa iji usoro nchịkwa nke usoro ego, nke na-agụ, sị:
Na otu azụmahịa ekwesịghị ịbuana karịa 3% nkwụnye ego.
Ugbu a, ị maara otú esi eme ego na bitcoin N'ezie. O zuru ezu naanị iji nhọrọ ịzụta ọnụọgụ iji rụọ ọrụ na okwu bitcoin. Ha abụghị ihe siri ike ma ha na-enye nsonaazụ ahịa zuru oke. Na ngalaba ọhụrụ Mkpuchi ga-emepụta atụmatụ maka ịzụ ahịa dị iche iche akụ cryptocurrency. Lelee ya!
Igwe ọkụ na esi esi eme atụmatụ
Ụlọ ahịa Olympus nyochaa ezigbo 2018
Ihe ndị ọzọ si na ụdị "Crypto ahia"
Otu esi enweta na uzo криптовалют
Esi eme ego ...
Otu esi enweta kọmputa na bitcoins
Otu esi eme ka bitcoins jiri ...
Otu esi eme ka ego na ego crypto na 2018 afọ
Otu esi eme ka ego na 2018 cryptocurrency ...
Ebee ka bitcoins ahia
Ebee ka ahia Bitcoin5 (100%) 4 votes ...
Mee ka otu esi enweta uru ...
Privat 24 nbanye
IQ Nhọrọ Ụgwọ 100 Ụgwọ Ụgwọ